မြန်မာမုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့(MMYG): အလှုရှင်များနဲ့ အလှုရက်
နိုင်ငံအသီးသီးမှ တာဝန်ယူအလှုခံပေးသော သူငယ်ချင်းများနဲ့ အလှုရှင်များအားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျား။
မရမ်းချောင်း အနာကြီးရောဂါစောင့်ရှောင့်ရေးဂေဟာရဲ့ လိုအပ်ချက်များအရ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဟာ ရရှိလာတဲ့အလှုငွေများကို ၀ှီးချဲလ်၊ ဆန် ၊ဆီ၊ ဆေးနဲ့ အ၀တ်အထည်များကို အချိုးကျလှုဒါန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။မလိုအပ်တာတွေကို ၀ယ်ယူလှုဒါန်းမိမှာစိုးလို့ တာဝန်ရှိသူကို ကျွန်တော်တို့လှုနိုင်မဲ့ ပမာဏကို ချပြပြီး မေးမြန်းခဲ့ရာ တာဝန်ခံ ဥက္ကဌရဲ့ ပြောပြချက်အရ ၀ှီးချဲလ်များ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ရီးရှင်းကုမ္မဏီကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ ရိုးရိုးအတွက် ငါးသောင်းငါးထောင်ကျပ်တိတိ၊ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ၀ှီးချဲလ်အတွက် ကျပ် တစ်သိန်းတစ်သောင်းလို့ ဆိုပါ တယ်။အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တော်တို့အနေနဲ့ ရရှိလာတဲ့ ပမာဏပေါ် မူတည်ပြီး ကျပ်ငါးသောင်း ငါးထောင်တန် ၀ှီးချဲလ်များ ၀ယ်လှုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ၀ှီးချဲလ် လှုဒါန်းလိုသောအလှုရှင်များအနေနဲ့ လှုဒါန်းလိုပါက အားလုံအဆင်ပြေစေရန် တစ်စီးလျင် ငါးသောင်းကျပ်နှုန်းဖြင့် လှုဒါန်း နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။လိုအပ်တဲ့ပမာဏကို ကျွန်တော်တို့အလှုခံရရှိတဲ့ ပမာဏထဲမှ ဖြည့်စွက်ပေးပြီး ၀ှီးချဲလ်မှာလည်း အလှုရှင်ရဲ့အမည်ကို ရေးထိုးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ှီးချဲကိစ္စပြီးလျင် တစ်အိတ်လျင် သုံးသောင်းဝန်းကျင် ဆန်အိတ်များ လှုဒါန်းပါမယ်။
၀ှီးချဲလ်နဲ့ ဆန်ဝယ်အပြီးမှာ ပိုတဲ့ အလှုငွေပမာဏထဲမှ ရာခိုင်နှုန်းအချို့ ကို ပိုတဲ့ပမာဏအပေါ် မူတည်ပြီး မရမ်းချောင်း အနာကြီးရောသည် -စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာရဲ့ ရာသက်ပန် ပဒေသာပင်ထဲကို လှုဒါန်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့အတူ အလှုရှင်များ အားလုံးရဲ့ အလှုဟာ ရာသက်ပန်ကုသိုလ် ဖြစ်နေစေဖို့အတွက်ပါခင်ဗျား။ပဒေသာပင်ထည့်ဝင်အပြီး ပိုနေတဲ့အလှုငွေထဲမှ မရမ်းချောင်းဂေဟာမှ စာရင်းပေးထားသော ဆေး၊ စားသုံဆီနဲ့ အ၀တ်အထည်များကို ထပ်မံဝယ်ယူ လှုဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။သွားရောက်လှုဒါန်းမည့်နေ့မှာ ဂေဟာမှ အနာကြီးရောဂါသည် ဝေဒနာရှင်များနဲ့ လိုက်ပါဆောင်ရွက်မဲ့ အလှုရှင် လူကြီး၊လူငယ်များအတွက် အမေရိကားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလှုရှင် နှစ်ဦးတို့မှ လူဦးရေ ၂၀၀ အရေအတွက် ဒံပါက် အကျွေးအမွေးဖြင့် ကုသိုလ်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် ၀ယ်ယူထားသော ၀ှီးချဲများ၊ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆေး၊ စသော အလှုပစ္စည်းများ တင်ဆောင်ရန်၊ အလှုရှင်များ လိုက်ပါနိုင်ရန် ကားနှစ်စီး လိုအပ်ပါ တယ်ခင်ဗျား။လိုအပ်သောကားအခက်အခဲအတွက် မက်ဖန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ လူ၁၅ဦးခန့်ဆန့်သော တောင်းအေ့ခ်ျယာဉ်တစ်စီးကို ဆီဖိုးသာ ကုန်ကျမည့် ပမာဏဖြင့် ကူညီပေးပါမယ်ခင်ဗျား။နောက်ထပ်ယာဉ်တစ်စီးအား အလှုရှင် ဒေါ်အိအိစိုးမှ ဒိုင်နာယာဉ်တစ်စီးကို မေတ္တာဖြင့် ကူညီပါမယ်ခင်ဗျား။
ပဒေသာပင်ထည့်ဝင်မည့် အလှုငွေမှလွဲပြီး ကျန်တဲ့ အလှုပစ္စည်းများဟာ မရမ်းချောင်းဂေဟာ မှ ပြောပြတဲ့ လိုအပ်တာများသာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
လှုဒါန်းမဲ့ရက်ကို ဧပြီလ၆ရက်၊သောကြာနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ထို့ကြောင့် အလှုငွေများကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ကိုကျော်စွာစိုးမြတ်ထံ ၂.၄.၂၀၁၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ကျွန်တော်တို့ပေးပို့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကြန်ရက်နဲ့ နီးကပ်နေတဲ့အတွက် အဲဒီရက်ထက်ကျော်ရင် မြန်မာနိုင်ငံ မှ ဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ လှုငယ်များအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်တာကို နားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အလှုရှင်များအနေနဲ့ ၂.၄.၂၀၁၂ရက်နေ့အထိ ပါဝင်လှုဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ကျွန်တော်တို့နဲ့ လိုက်ပါပြီး မိမိတို့အစီအစဉ်နဲ့ လှုဒါန်းမည်ဆိုလျင်လည်း ကျွန်တော်တို့ကို လှုဒါန်းမဲ့ရက်မတိုင်မီ ဆက်သွယ်ပေးစေလိုပါတယ်။နောက်ထပ် ထပ်မံ ပါဝင်လှုဒါန်းကြလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်နေပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်တော်တို့ ခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေထားတဲ့ အသက်ရှင်ခွင့်တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ပြန်လည်မျှဝေကြအုံးစို့လားခင်ဗျား။
ကိုဆောင်းဦးရဲ့ သီချင်းထဲက စာသားတစ်ချို့ လိုပါပဲ..။
ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးလည်း ရှိပါစေကွာ..သူများတွေအတွက်လည်း ငဲ့ညှာပါ..
ယုံကြည်ပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့စိတ်ဓါတ်တွေ မွန်မြတ်တာ…”
ယနေ့အချိန်ထိ မရမ်းချောင်းအတွက် အလှုခံရရှိသော စာရင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဗြိတိန်မှ ပါဝင် လှုဒါန်းကြသူများ
၃။ဒေါက်တာလှစိုး + ဒေါ်ဝေေ၀လွင်စိုး
၄။ကိုကို ညီညီ (လန်ဒန်)
၆။ဦးစိန်ဌေး + ဒေါ်ဆွေဆွေဦး (ဘာမင်ဂမ်)
၇။ဦးတင်အောင် မိသားစု (လန်ဒန်)
စုစုပေါင်း လက်ခံရရှိဆဲ အလှုငွေ
၁။ဦးတင်ရှိန် + ဒေါ်ချိုချိုရီ မိသားစု
၁၈၀ ဒေါ်လာ (၀ှီးချဲလ် နှစ်စီး)
၄။သဇင်ထက်အောင် ၊ မိုးမြင့်သူ
၅။နိုင်ချစ်စိန်+မိအုန်းရီ ၊သမီး မိမြစန္ဒာ
၂၀။မကော့ဆွမ် @ အားရှန်
၁၃၀၀ ဒေါ်လာ (စင်ကာပူဒေါ်လာ)
၂။နွေတေးရှင် @ မင်းဧရာ
၁။မသဇင်ဟန်၊ မယုယုဟန် မိသားစု
၃၀၀၀ ဒေါ်လာ (TWN)
၁၀၀၀ ဒေါ်လာ (TWN)
စုစုပေါင်း လက်ခံရရှိဆဲ ပမာဏ
၅၀၀၀ ဒေါ်လာ (TWN)
၅၅၀၀၀ ကျပ် (၀ှီးချဲလ် တစ်စီး)
၅၀၀၀ ယမ်း + ၅၅၀၀၀ ကျပ်
၁၀၀ ဒေါ်လာ (US)
၁၀၀ ဒေါ်လာ + ၈၀,၀၀၀ ကျပ်
ထပ်မံရရှိပါက အလှုရှင်များအား ထပ်မံဖော်ပြပါမယ်။
15:49 ( GMT)
Posted by မြန်မာမုဒိတာလူငယ်များ at 00:55
Labels: မရမ်းချောင်း, အလှု
ဦးလေးရေ..သားတို့ ဆီက သူငယ်ချင်းတစ်စုအလှုငွေအတွက် မေးပို့ ပေးလိုက်မယ်နော်
18 March 2012 at 01:43
ကူညီ ကျန်းမာ၊ ကျောင်းပညာ
မုဒိတာမှ၊ လှူဒါန၊ အမျှပေးဝေမည်။
မုဒိတာသုံး၊ လူ့နှလုံး၊ ရွှင်ပြုံးစေရမည်။
+၄၄ ၇၇၄၀ ၉၈၃၉ ၄၂
+၁၂၀ ၁၈၈၈ ၉၇၅၁
ရန်နိုင် @ နေ၀သန်
+81 80 3852 5214
+၁၀ ၂၁၄၂ ၁၂၆၆
+၆၅ ၈၃၇၅ ၁၀၆၉
ပစ်ပစ် @ ဂျယ်ရီပစ်ပစ်
+၈၈၆ ၉၃၀ ၄၁၃ ၂၂၀
+၆၀၁၆ ၃၆၂၇ ၆၆၄
+၆၀ ၁၇၃၀ ၄၇၇ ၃၅
+၆၀၁၀ ၂၈၂၇ ၀၇၁
+၉၅ ၉၄၂၁ ၀၅၉၈ ၂၇
၂။ဒေါ်အိအိစိုး (Doreen Tin)
+၉၅ ၉၅၁၅ ၂၄၆၃
MMYG မှတ်တမ်းရေးရာများ December (1) June (1) May (1) October (1) September (1) August (1) July (1) June (1) January (1) October (1) September (2) August (3) July (4) April (5) March (4) January (4)
MMYG ကို ထောက်ခံမယ်ဆိုရင်
<br/><a href="http://mudita-mmyg.blogspot.com/"></a><div><a href="http://mudita-mmyg.blogspot.com/"><img src=<a href="http://4.bp.blogspot.com/-YmMrC_-zfPM/T42B4zZJCCI/AAAAAAAAAPA/S9fzbkVHAEg/s1600/MMYG.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="http://4.bp.blogspot.com/-YmMrC_-zfPM/T42B4zZJCCI/AAAAAAAAAPA/S9fzbkVHAEg/s320/MMYG.jpg" width="150" /></a> /></a><br/></div>
Find MMYG on FB
အလှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ (5)
အလှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ (11)
MMYG ရဲ့ ခေါင်တိုင် blogger များ
အရှင်ဇနက @ အင်္ဂါမောင်
ဗညားရှိန် @ လင်းခေတ်ဒီနို
ကိုငြိမ်းနိုင် @ ကိုနိုင်ထွဋ်
ထောက်တိုင် blogger ကုသိုလ်ရှင်များ
မောင်မျိုး @ ဇာတ်ဆရာ
ကိုထွဋ် @ မျှစ်
SUN BINGO Online Casino casino online Flag counter Poker
MMY GROUP. Simple theme. Powered by Blogger.